Filipina: Volavolan-dalàna ao amin’ny Kaongresy Hanoherana ny Fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy
Filipina: Volavolan-dalàna ao amin'ny Kaongresy Hanoherana ny Fampihorohoroana
Voadika ny 30 Avrily 2018 11:35 GMT
Nanamarina ny fanjakana Filipina fa ilaina maika ny fandaniana ilay volavolan-dalàna manohitra ny fampihorohoroana. Naneho ny ahiahiny ny Mpanohitra fa raha toa ka lasa lalàna ilay volavolan-dalàna dia hoararaotin'ireo mpitarika mba hanaporetana ny fanoherana ara-drariny.
Mandà ny matoandahatsoratry ny gazety iray tao Manila miresaka mikasika ilay volavolan-dalàna ny Philippine Commentary. Raha toa ka tena nanohana tanteraka ny hisian'ny lalàna iray manohitra ny fampihorohoroana ilay blaogera, hazavainy ny antony tsy nahafa-po azy tamin'ilay fepetra natolotra toy ny voasoratra ao amina fitantaràna roa amin'izao fotoana izao:
(1) Mihevitra aho fa ny fitsarana manokana, toy ny Fitsarana FISA ao Etazonia dia fanavaozana iray tena sarobidy sy ilaina mba hitantanana ilay karazana famerenana mandinika ny resaka ara-pitsarana ary ny fanarahamaso ireo hetsika, politika ary paikady,mifandray amin'ny asa fampihorohoroana, izay mitaky fomba fanao sy fampiharana vaovao ary fepetra fiarovana izay mila averina jerena sy diovina matetika.
(2) Tsy misy lisitra manokan'ireo Fikambanana Mampihorohoro izay avaozina, averina dinihina ary eken'ny Kaongresy na ny Depatermantan'ny Fitsarana isan-taona, toy ny ataon'ny lalàna ao Etazonia sy Eoropa. Heveriko fa IO no karazana fanjavozavoana manamora ny fizorana mankany amin'ny fanararaotana. Kanefa raha isan-taona isika no mahafaritra ireo lasibatra efa fantatra, tsy afaky ny hanapaka hevitra tampoka eo fotsiny izao ny fanjakana hoe fikambanana iray mpampihorohoro ny fiforonana ara-drarin'ny Mpanohitra .
Mino ny The Philippine Experience fa nampiasaina mba handrehetana ny haromotana sy tahotra eo anivon'ny vahoaka ireo famelezana baomba vao haingana tao atsimon'i Filipina:
” Ireo fipoahana baomba tany atsimo dia famantarana fa tokony hitandrina avokoa isika rehetra. Ampiasain'ny governemanta mba hanamafisana ny fanohanana ilay volavolan-dalàna momba ny ady amin'ny fampihorohoroana izy io. Raha toa ka mbola manaja kokoa ny zo ny dikany avy amin'ireo Senatera, ny an'ny governemanta kosa dia midadasika loatra ka na dia ny fanoherana ara-drariny aza dia mety ho lasa antony hisamborana.”
Nanoratra ny antony anoheran'ny Senatera sasany ilay volavolan-dalàna manohitra ny fampihorohoroana i Piercing Pens. Nilaza ny fandalinana nataona vondrona mpanadihady tsy miankina ihany koa ilay blaogera:
“Ny fikendrena ireo lazaina ho mpikomy noho ny antony fanoherana kaominisma ary ny ady amin'ny fampihorohoroana dia mety hiteraka fihenana fandraisana andraikitra ara-politika kokoa noho ny fanafihana ireo mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra nentim-paharazana izay mety hiteraka fanehoankevitra bebe kokoa avy amin'ireo vato nasondrotry ny tany”
Peter Lavina, blaogera sady mpanolotsaina ao amin'ny Tanànan'i Davao (ao atsimon'i Filipina) dia manana ity raikipohy ity mba hamongorana ny fampihorohoroana:
“Ela no ninoako fa fanehoankevitra manoloana ny tsy rariny, fanararaotana sy fangejàna ny fampihorohoroana. Avelao any ireo zava-dratsy telo ireo ary soloy ”fianarana, fahatakarana ary fanajàna” dia azoko antoka fa ho toeram-ponenana iray tsara lavitra, raha tsy ho feno fahandriam-pahalemana, ity tanintsika ity.”